မြန်မာမွတ်စ်လင်မ် စည်းလုံးခြင်း၏အင်အား: အစ္စလာမ်သာသနာမှာ အိမ်တွင်းပုန်းဝါဒမရှိ
ဘာသာခြားတွေက သူတို့ဘာသာနဲ့ လူမျိုးဘဲအကောင်းကြီးမှတ်ပြီး မွတ်စလင်မ်ကို အမျိုးမျိုးပြောဆို ထိုးနှက်လျှက်ရှိကြပါတယ်။ မွတ်စလင်မ်အမျိုးသားဆိုလည်း တစ်မျိုး၊ မွတ်စလင်မ် အမျိုးသ္မီးဆိုလည်းတစ်ဖုံ လူလူချင်းစာနာမှုမရှိ ချင့်ချိန်မှုမရှိ လျှာမှာအရိုးမရှိတိုင်း ပြစ်တင်ပြောချင်ရာပြောနေကြတယ်။ မွတ်စလင်မ်အမျိုးသ္မီးတွေကို အိမ်တွင်းပုန်းမတွေလို့ ရမ်းကားပြောတဲ့ဘာသာခြားတွေနဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံက ရှေ့ဟောင်း ဓလေ့ထုံးတမ်း အစဉ်အလာကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း ကျင့်သုံးလိုသူများနားလည်စေရန် လင်းပြဖို့တော့လိုပါတယ်။
အစ္စလာမ်သာသနာမှာ တမန်တော်မြတ်၏ ကြင်ယာတော်များမှာ အခြားအမျိုးသ္မီးများနှင့်မတူအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ အချစ်တော်တမန်တော်မြတ်နှင့် ထိမ်းမြားထားသောကြောင့်မြင့်မြတ်သော အမျိုးသ္မီးများ ဖြစ်ကြပြီး သူမတို့အကျင့်သီလကောင်းမွန်စေရန် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှအထူးတလည် သွန်သင်ဆုံးမပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမတို့၏ကောင်းမှုအပေါ်၌လည်း နှစ်ဆ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးထားပါတယ်။.ထို့ကြောင့် သာမန်အမျိုးသ္မီးများနှင့် စံပြ မိန်းမမြတ်တို့ကို ခွဲခြားနားလည်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။
(39:4). Because their status is so high, it is appropriate to state that the sin, if they were to commit it, would be so much worse, so as to protect them and their Hijab.
(34. And remember, that which is recited in your houses of the Ayat of Allah and Al-Hikmah. Verily, Allah is Ever Most Courteous, Well-Acquainted with all things.)-(We shall give her, her reward twice over, and We have prepared for heranoble provision.) i.e., in Paradise, for they will be in the dwellings of the Messenger of Allah in the highest reaches of `Illiyin, above the dwellings of all the people, in Al-Wasilah which is the closest of the dwellings of Paradise to the Throne)..The Wives of the Prophet are not like Other WomenThis Ayah is addressed to only to them, and not to other women, in the event that any of them should commit open Fahishah.
Ref : http://www.theholybook.org/content/view/8292/2/-
အစ္စလာမ်သမိုင်းကိုကြည့်ရင် မိန်းမမြတ်တွေအများကြီးကို ရှိကြပါတယ်။
၁။ မြတ်နဗီတမန်တော် မူဟာမတ် (ဆွ) ရဲ့ ကြင်ယာတော် ခဒီဂျာ (ရ)
၂။ ကြင်ယာတော် အာအေရှာ (ရ)
၃။ အီစာ (အ) ၏မိခင် မေရီယမ်သခင်မ
၄။ ဖီရ်အောင်ဘုရင်၏မိဖုရား အာဆီယာသခင်မ
၅။ မာမာဟာဝါ (အ) တို့ဖြစ်ပါတယ်။
-ခဒီဂျာ (ရ) သခင်မသက်ရှိနေစဉ်က အမျိုးသားများနဲ့တန်းတူ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသို့ကုန်ကူး ခဲ့ပါတယ်။
-အာအီရှာသခင်မမှာလည်း တမန်တော်မြတ်ကွယ်လွန်ပြီးနောက် သောင်းနဲ့ချီရှိသော စစ်ဗိုလ်ပါတတ်သားများကို သူမကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။
-မာမာဟာဝါ (အ) ကိုယ်တိုင် ဘာဘာအာဒမ်နဲ့တွေ့ဖို့ နှစ်ပေါင်းများစွာအရပ်ရပ်ကိုသွားပြီး ရှာဖွေခဲ့ရပါတယ်။.ဘာသာခြားတွေပြောဆိုသလို မွတ်စလင်မ်အမျိုးသ္မီးတွေ အိမ်တွင်းပုန်းဆိုရင် အထက်ကစံပြ သာသနာရဲ့ မိန်းမမြတ်တွေမှာ ဘယ်လိုလို့ လွတ်လပ်စွာသွားလာနိုင်ခဲ့ပါ့မလဲ။ ဒါကြောင့် အိမ်တွင်းပုန်းဆိုတာ မမှန်ကန်ကြောင်း သက်သေပြနေပါတယ်။
အိမ်တွင်းပုန်းဝါဒဟာ အစ္စလာမ်ကမဟုတ်ဘဲ သေချာလေ့လာကြည့်လိုက်ရင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတို့က ဓလေ့ထုံးတန်းအစဉ်လာတို့သာဖြစ်တယ်။ အဲဒီဓလေ့ထုံးတမ်းကို မြန်မာဘာသာခြားတွေ ကိုယ်တိုင် အတိတ်သမိုင်းမှာကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်။သူတို့နိုင်ငံတွေရဲ့ ခေတ် တစ်ခေတ် လုံခြုံရေး အခြေအနေတွေကြောင့် အိမ်တွင်းပုန်း စနစ်ကိုကျင့်သုံးခဲ့ကြတယ်။ စားကောင်းသောက်ဖွယ်တွေစားပြီး လိုလေသေးမရှိပေးကမ်းစွန့်ကြဲတော်မူတဲ့ ကျေးဇူးရှင်ကို ရှကူရ်လုပ်ကာ ကျေးဇူးသိတတ်ရမယ့်အစား ရလာသောအဟာရ ခွန်အားဖြင့် အဓ္ဓမပြုကျင့်မှု၊ ကာမကျူးလွန်စွာလိုက်စားမှုများဖြစ်ပွါးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကတစ်ဆင့် ဇီနာ နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းချီ၊ စာအုပ်များ ထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့ကြတယ်။ ဖန်ဆင်းရှင်ကို ဦးချရမယ့်အစား လူ၊ သတ္တဝါ၊ နတ်ဝိညာဉ်တို့ကို ပူဇော်ကိုးကွယ်ကြလေတယ်။
၎င်းတို့ကိုယ်တွင်း တိရိစ္ဆာန်စရိုက်များကို မနှစ်သက်သော ၎င်းတို့ဘာသာတူမှသော်လည်းကောင်း၊ မွတ်ဆလင်မ်များမှသော်လည်းကောင်း သ္မီးအပျိုကညာများကို စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် လွတ်လပ်မှုအချို့ကို စည်း တားခဲ့ကြတယ်။ ထို့အပြင်အိမ်ထောင်ရှင်မများသိက္ခါအတွက် အသွားအလာ အနေအထိုင်တွေကို စည်းကမ်းချက်တွေသပ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်။။-လူ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာ လူမိစ္ဆာ၊ နတ်မိစ္ဆာ (ရှိုင်သွာန်) များရှိကြသဖြင့် လွတ်လပ်မှုကို လိုတာထက် ပိုသွားရင် မကောင်းမှု၏သားကောင်အဖြစ် အများဆုံးကျရောက်ကြသည်မှာ အမျိုးသ္မီးများသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီနေ့ထိတိုင် လူကုန်ကူးမှုလုပ်ငမ်းများစွာရှိနေကြတယ်။ ထို့အပြင် မူးရစ်ဆေးဝါး၊ အလောင်းကစား၊ မှောင်ခို အလုပ်တွေမှာ မိန်းကလေးကို ဓါးစာခံအဖြစ်၊ ငါးမျှားစာအဖြစ် အသုံးချနေကြတာ များစွာရှိကြပါတယ်။
နိုင်ငံတိုင်းမှာ အထူးသဖြင့် အေရှ၊ အာရပ်နှင့် အာဖရိကတို့မှာ အမျိုးသ္မီးကောင်းပီသရန် အသွား၊ အလာ၊ အနေ၊ အထိုင်၊ အပြောအဆို လိမ္မာရေးခြားရှိအောင် မိဘ - ဆရာ၊ ဆွေမျိုး၊ ခင်ပွန်းသည်တို့မှ သွန်သင်လမ်းပြထိန်းသိမ်းပေးကြပါတယ်။
အခုခေတ် ပညာရေး၊ စီးပွါးရေး၊ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး အစစကျယ်ပြန့်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ လူ - လူချင်းစောင့်ရှောက်ကာကွယ်တဲ့ တရားဥပဒေတွေရှိကြပါတယ်။ လက်ရှိနေထိုင်တဲ့ မြို့နယ်အသိုင်းအဝိုင်း အခြေအနေအပေါ်မူတည်ပြီး မိမိတို့လွတ်လပ်ခွင့်ကို တိုင်းတာ ချင့်ချိန်ပြီးနေထိုင်လို့ရပါတယ်။ ခေတ်မှီတိုးတက်၊ လုံခြုံမှုရှိပြီး တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိတဲ့ အရပ်ဒေသမှာ ရှေ့လွန်လေပြီးသော ခေတ်က စည်းကမ်းသပ်မှတ် ချက်အတိုင်းဆက်လက်လိုက်နာနေထိုင်ပြီး လိုတာထက်ပိုပြီး တစ်ဦးချင်းရဲ့ လွတ်လပ်မှုကို ထိန်းချုပ်ထားရမယ်ဆိုရင်
- ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုလျှော့နည်းလာမယ်။
- ကိုယ့်အရည်အချင်း ကိုယ်မသိဖြစ်မယ်။
- လူမှုဆက်ဆံရေးမှာ အားနည်းလာမယ်။
- ကြောက်ရွံ့ စိတ်လွယ်မယ်။
- စိတ်အလိုမကျ ဖြစ်နေတတ်တယ်။
- လူအကဲခပ် ညံ့မယ်။
- လူအလိမ်ခံရနှုန်း များမယ်။
- မွေးလာတဲ့မျိုးဆက်သစ်ကို ပညာရေးပံ့ပိုးမှု၊ ခေတ်နှင့်အညီ လမ်းပြသွန်သင်မှုအားနည်းမယ်။
မိမိကိုယ်ကိုသော်လည်းကောင်း တစ်ဦးတစ်ယောက်မှသော်လည်းကောင်း သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းချက်များ ဘာသာရေးနှင့်လည်း မဆန့်ကျင်၊ ဣနြေ္ဒိလည်းမပျက်၊ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့လည်းဝင်ဆန့်တယ်ဆိုရင် အဲဒီ စည်းကမ်းဟာအကျိုးရှိစေမယ့် စည်းကမ်းဖြစ်တယ်။ အရမ်းတင်းမာသွားရင် ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးပိုရနိုင်တယ်။ အထူးသဖြင့် လွတ်လပ်မှုနည်းပါးလှတဲ့ လူတွေမှာ စိတ်ကျဉ်းကျပ်မှု၊ စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့စိတ်ကျဝေဒနာခံစားရတတ်တယ်။
လူ၊ သတ္တဝါတို့ရဲ့ သဘာဝမှာ တစ်ဖက်ကလျှော့ပေးလေ နောက်တစ်ဖက်က ရှေ့တိုးလေဖြစ်တယ်။ ဒေါင့်ကပ်သွားတဲ့အခါ အသေခံအရှုံးပေးလိုက်တာနဲ့ပေါက်ကွဲတွန်းလှန်တာ နှစ်မျိုးဘဲရှိတယ်။ ဒေါင့်ကပ်တဲ့အထိမရောက်စေဖို့ သတိရှိရမယ်။ အဲဒီမှာအလျှော့အတင်းကြိုးတွေရှိတယ်။ မခံချင်စိတ်၊ ဒေါသတို့ကို ရှေ့မထားဘဲ ပါးနပ်မှုနဲ့ စကားပြောခြင်းအတတ်ပညာကို အသုံးချ ညှိနှိုင်းရမယ်။
လူရယ်လို့ဖြစ်လာတယ်၊ အရှင်မြတ်ကဆင်ချင်တုံတရားလည်း ချီးမြှင့်ထားတယ်။ကိုယ့်ယုံကြည်ရာဘာသာကို အသေအချာနားလည်ကြဖို့နဲ့ အထွေထွေဗဟုသုတကြွယ်ဝဖို့က ပထမ အဓိကအရေးကြီးတယ်။ အဖက်ဖက်က တိုးတက်မှုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ တတားခင်းရမယ်။-အချို့မိန်းကလေးများမှာ မိန်းကလေးအချင်းချင်းတောင်တွေ့ဆုံ စကားပြောဆိုဖို့အရေး နေ့ရွှေ့ ညရွှေ့၊ ရှေ့စကား နောက်စကားမညီနိုင်ဖြစ်နေရှာတယ်။ အခုလိုလူမမြင်ရတဲ့ အွန်လိုင်းကိုအသုံးချပြီး မွတ်စလင်မ်ကိုပုတ်ခတ်နေတဲ့အချိန်၊ မွတ်စလင်မ်အယောင်ဆောင်များဟာလည်း မွတ်စလင်မ် group များနှင့်ဝင်ရောလျှက် စပိုင်လုပ်နေကြတဲ့အချိန်မှာ အဲဒီလိုမိန်းကလေးတွေမှာလည်း နေရင်းထိုင်ရင်း မွတ်စလင်မ်အယောင်ဆောင် စရင်းထဲဝင်သွားနိုင်တယ်။
ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ့်လူမျိုးကို ဘာသာခြားတွေ အရှောင်နေရင်း ထိုးနှက်မှုမဖြစ်စေရအောင် ကိုယ့်မိသားစုကိုယ်တိုင်က ဗဟုသုတ ရှာဖွေစည်းပူးရမယ်။ ကိုယ်မွေးတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်တယ်။ ဘေးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံမှာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ကသူတို့အမျိုးတော်နေဦးတော့ သူတို့ကကိုယ့်မြန်မာပြည်ဖွားကို သူစိမ်းအဖြစ်မြင်တယ်။ ဘေးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံနဲ့ သော်ဟီးဒ်တရားကို သွေဖယ်ငြင်းဆန်သူတို့ရဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာကို ကျင့်သုံးတာထက် မိမိတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာက ကျမ်းကိုနားလည် သဘောပေါက်ကျင့်သုံးနိုင်ဖို့ကလိုတယ်။
ဘာမဆို အစွန်းမရောက်ဖို့၊ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တာထက် မိမိအားနည်းမှုကြောင့် တစ်ဖက်သားရဲ့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ကို ချုပ်နှောင်တာတို့ မဖြစ်စေရန်လိုအပ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာ ငြိမ်းချမ်းရာ သန့်ရှင်းရာ လှပရာနေရာတွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။-စာရေးသူ ဆက်သွယ် လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ လူမှုရေးအသင်းများ၊ ကျန်းမာရေးဌာနများမှ စုဆောင်းထားသော အချက်အလက်များနဲ့ ဒီဆောင်းပါးကိုရေးသားမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အချို့စာဖတ်သူများအတွက် အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
မွတ်စလင်မီးန် မွတ်စလင်မားဟ်အားလုံးကို အရှင်မြတ်ထံမှ ပညာအလင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းမှုကျရောက်ပါစေ။ အာမီးန်။
Posted by Ordinary person at 2:28 AM
လုံမလေးရယ် လှတယ်ကွယ် မြင်ရသူ ရင်အေးတယ်